Mandalay Archives – BFI Education Services Co., Ltd.
မိဘများနေ့ ပွဲတွင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည့် မိဘများ
၂၀၁၈ခုနှစ် ဇွန်လ ၃၀ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့သော ” မိဘများနေ့” ပွဲတွင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည့် မိဘများ၏ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များ
August 9, 2018August 14, 2018by Aung Thu Ya
Yesterday, Mandalay Fire Department paid usavisit to giveapresentation and practical demonstration on fire safety. We hope our students took home some valuable pointers and will now know how to behave in case of an emergency.
August 7, 2018August 14, 2018by Aung Thu Ya
August 6, 2018August 6, 2018by Aung Thu Ya
လူကြီးမင်းတို့ ရင်သွေးငယ်များအတွက် စနေတနင်္ဂနွေကျောင်းပိတ်ရက်မှာ အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းကောင်းကောင်းရှာနေပါသလား..???
လူကြီးမင်းတို့ ရင်သွေးငယ်များအတွက် စနေတနင်္ဂနွေကျောင်းပိတ်ရက်မှာ အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းကောင်းကောင်းရှာနေပါသလား..??? Mandalay International Science Academy Weekend English Course မှာလာရောက်အပ်နှံလိုက်ပါ ။Weekend English Course ကို အသက် (၆)နှစ်မှ (၁၄)နှစ် အရွယ် ရင်သွေးငယ်များတက်ရောက်သင်ကြားနိုင်ပြီး ဇွန်လ(၂၃)ရက်နေ့စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။သင်ကြားမည့်အချိန်မှာ စနေ၊တနင်္ဂနွေ နံနက် ၈း၄၅ မှ နေ့လည် ၁၂း၃၀ ထိဖြစ်ပါသည်။ MISA Weekend English Courseတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ဆရာ၊ဆရာမများမှ  အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါကို အခြေခံမှစ၍သင်ကြားပေးခြင်း  အသံထွက်မှန်ကန်အောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း  Cambridge သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို အသုံးပြု၍ ကလေးများရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအပြောစွမ်းရည်၊စာဖတ်စွမ်းရည်၊နားထောင်စွမ်းရည်၊ အရေးစွမ်းရည်တုိ့ တိုးတက်စေရန်သင်ကြားပေးခြင်း  အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည် တိုးတက်စေရုံသာမက ကလေးများရဲ့ စုပေါင်း...
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်သည် လာမည့်မေ (၂၈) နေ့တွင် စတင်တော့မည့်အကြောင်း အသိပေး ပြောကြားလိုပါသည်။
မိဘများအားလုံး မင်္ဂလာပါရှင်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်သည် လာမည့်မေ (၂၈) နေ့တွင် စတင်တော့မည့်အကြောင်း အသိပေး ပြောကြားလိုပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့၏ ရင်သွေးရတနာများအတွက် ဘက်စုံပြီး ပြည့်စုံနေသော ကျောင်းကောင်းကို ရှာနေ တယ်ဆိုရင် ပထမဦးစွာအနေနဲ့ Mandalay International Kindergarten [M.I.K] ကျောင်းတော်ကြီးကို လာရောက်လေ့လာစေလိုပါသည်။ ကျွန်မတို့ ကျောင်းတော်ကြီးမှာဆိုရင် . . . ၁။ နိုင်ငံတကာ မူကြိုပညာရေး သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ အသုံးပြုထားရှိခြင်း ၂။ ပညာရေးအတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းစုံလင်စွာ ထားရှိပေးခြင်း ၃။ ကလေးငယ်များအတွက် ဆရာမအင်အား လုံလောက်စွာထားရှိသောကြောင့် လုံခြုံစိတ်ချမှု အပြည့်ရှိ ခြင်း ၄။ စာသင်ခန်းများ ကျယ်ဝန်းသည့်အတွက် ကလေးများလွတ်လပ်စွာ စာသင်ကြားရခြင်း ၅။ အရည် အချင်း...
May 9, 2018August 6, 2018by Aung Thu Ya
Last Summer camp trip to USA
Last Summer camp trip to USA from Shu Khinn Thar International College, Bahan International Science Academy, Mandalay International Science Academy students.
November 16, 2017July 17, 2018by admin
Chemistry of State University of New York at Oswego. This year’s event attracted more than 800 projects prepared and presented by more than 300 students from 58 countries. Our students got Silver Medal in the Art Category with their movie about environment. We wholeheartedly congratulate the two students and their teachers on this great success....
We would like to thank our parents for their support for the ‘Helping Hands’. As we all know, books, toys, clothes, food, money and etc were collected. Then we visited the orphanage together with the teachers and some parents. We had unforgettable moments as we witnessed the joy and happiness of the orphans. We are...
Celebration of Tazaungmone Festival
Tazaungmone Festival is celebrated on the first month of the cold season in Myanmar. Its zodiacal sign coincides with scorpion. This represents and means illumination through oil lamp by Lord Buddha. During this season people in Myanmar make donations to monasteries for monks’ daily use. This is also called Kathein when people’s principle of contribution...